ဒီ၃ချက်ကိုမလိုက်နာနိုင်ရင် ပျော်ရွှင်ခိုင်မြဲတဲ့အချစ်ရေးမျိုး ဘယ်တော့မှမရနိုင်… – Trend.com.mm
Posted on October 30, 2018 October 30, 2018 by Noel
Relationship ဆိုတာခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာပါ။ဒီလိုခက်ခဲရတဲ့ကြားထဲ ဒီအချက်သုံးချက်ကိုမလိုက်နာဘူး၊ဒီအချက်သုံးချက်မရှိဘူးဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘယ်လောက်ချစ်ပါတယ်ပြောပြော သင်တို့ရဲ့အချစ်ရေးက ရေရှည်တည်မြဲတဲ့အချစ်ရေးမျိုးလုံးဝဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုအချက်တွေလဲ?
*လောကကြီးမှာမသိသေးတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တစ်ခုခုမသိလို့ အပြစ်တင်နေမယ့်အစား တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဗဟုသုတတွေကို Sharing လုပ်ပါ
*ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတန်ဖိုးထားပါ။လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုပြီး နားလည်မှုကို အလွဲသုံးစားမလုပ်ပါနဲ့
စုံတွဲတွေကြားမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချီးကျူးတာ၊တစ်ဖက်လူရဲ့ကြိုးစားမှုကိုအသိအမှတ်ပြုတာကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။သူက ကိုယ့်ထက်သာရင်သာမယ်။ဒါကို မနာလိုဝန်တိုမဖြစ်ပဲ ချီးကျူးစကားဆိုပါ။မောင်တစ်ထမ်းမယ်တစ်ရွက်ဆိုသလို သူရှေ့ကခေါင်းဆောင်သွားနေချိန်မှာ ကိုယ်ကနောက်ကနေ လိုက်နိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ်က ဘယ်လောက်ပဲသေလောက်အောင်ကြိုးစားထားပါစေ အသိအမှတ်ပြုတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင် စိတ်ဓာတ်ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့အရည်အချင်းနဲ့ကြိုးစားမှုကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့မမေ့ပါနဲ့
ချစ်သူစုံတွဲတွေတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လေးစားမှုရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့စာသားကို တော်တော်များများဖတ်မိ၊သိမိကြမှာပါ။ဒါကလည်း အချစ်ရေးတစ်ခုမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ။ချစ်သူဖြစ်လာပြီဆိုကတည်းက သူ့ဘက်က အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ပြောတာကိုလက်ခံရမယ်။နားထောင်ရမယ်။ဒီလိုပဲ ကိုယ်က သူနဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူစိမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူမဖြစ်သင့်တာမဖြစ်ရအောင်၊မလုပ်သင့်တာမလုပ်ရအောင်ကိုယ့်မှာပြောပိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိပါတယ်။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြောတာကို နားမထောင်ဘူး၊လက်မခံဘူး။ကိုယ်လုပ်ချင်ရာလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီအချစ်ရေးက ဘယ်လိုမှရေရှည်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လေးစားမှုရှိတာဟာ အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုချသလိုပါပဲ။အရမ်းအရေးပါပါတယ်။
ကဲ သင်တို့အချစ်ရေးမှာရော ဒီသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံရဲ့လား?
Relationship ဆိုတာခိုငျမာအောငျတညျဆောကျဖို့ခကျခဲတဲ့အရာပါ။ဒီလိုခကျခဲရတဲ့ကွားထဲ ဒီအခကျြသုံးခကျြကိုမလိုကျနာဘူး၊ဒီအခကျြသုံးခကျြမရှိဘူးဆိုရငျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျဘယျလောကျခဈြပါတယျပွောပွော သငျတို့ရဲ့အခဈြရေးက ရရှေညျတညျမွဲတဲ့အခဈြရေးမြိုးလုံးဝဖွဈလာမှာမဟုတျပါဘူး။ဘယျလိုအခကျြတှလေဲ?
*လောကကွီးမှာမသိသေးတာတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။တဈခုခုမသိလို့ အပွဈတငျနမေယျ့အစား တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဗဟုသုတတှကေို Sharing လုပျပါ
*ကိုယျ့လှတျလပျခှငျ့ကိုတနျဖိုးထားပါ။လှတျလပျခှငျ့ပေးထားတယျဆိုပွီး နားလညျမှုကို အလှဲသုံးစားမလုပျပါနဲ့
စုံတှဲတှကွေားမှာ တဈယောကျကိုတဈယောကျခြီးကြူးတာ၊တဈဖကျလူရဲ့ကွိုးစားမှုကိုအသိအမှတျပွုတာကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။သူက ကိုယျ့ထကျသာရငျသာမယျ။ဒါကို မနာလိုဝနျတိုမဖွဈပဲ ခြီးကြူးစကားဆိုပါ။မောငျတဈထမျးမယျတဈရှကျဆိုသလို သူရှကေ့ခေါငျးဆောငျသှားနခြေိနျမှာ ကိုယျကနောကျကနေ လိုကျနိုငျဖို့လညျးလိုအပျပါတယျ။ကိုယျက ဘယျလောကျပဲသလေောကျအောငျကွိုးစားထားပါစေ အသိအမှတျပွုတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရငျ စိတျဓာတျကသြှားပါလိမျ့မယျ။ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့အရညျအခငျြးနဲ့ကွိုးစားမှုကိုအသိအမှတျပွုဖို့မမပေ့ါနဲ့
ခဈြသူစုံတှဲတှတေဈယောကျကိုတဈယောကျလေးစားမှုရှိဖို့လိုတယျဆိုတဲ့စာသားကို တျောတျောမြားမြားဖတျမိ၊သိမိကွမှာပါ။ဒါကလညျး အခဈြရေးတဈခုမှာမရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့အခကျြတဈခုပါပဲ။ခဈြသူဖွဈလာပွီဆိုကတညျးက သူ့ဘကျက အကြိုးသငျ့အကွောငျးသငျ့ပွောတာကိုလကျခံရမယျ။နားထောငျရမယျ။ဒီလိုပဲ ကိုယျက သူနဲ့အရငျးနှီးဆုံးသူစိမျးဖွဈတဲ့အတှကျသူမဖွဈသငျ့တာမဖွဈရအောငျ၊မလုပျသငျ့တာမလုပျရအောငျကိုယျ့မှာပွောပိုငျခှငျ့ဆိုတာရှိပါတယျ။တဈယောကျနဲ့တဈယောကျပွောတာကို နားမထောငျဘူး၊လကျမခံဘူး။ကိုယျလုပျခငျြရာလုပျမယျဆိုရငျ ဒီအခဈြရေးက ဘယျလိုမှရရှေညျအဆငျပွမှောမဟုတျပါဘူး။တဈယောကျကိုတဈယောကျလေးစားမှုရှိတာဟာ အခွခေံအုတျမွဈတဈခုခသြလိုပါပဲ။အရမျးအရေးပါပါတယျ။
ကဲ သငျတို့အခဈြရေးမှာရော ဒီသုံးခကျြနဲ့ပွညျ့စုံရဲ့လား?